को GED® परीक्षण मा के छ? | USAHello | USAHello
को GED® परीक्षण मा के छ?
को GED® परीक्षण मा के छ? आफ्नो परीक्षण को लागि तयार गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका GED® परीक्षण मा के छ थाहा छ. यहाँ तपाईँले GED® परीक्षण छ के जान्नु आवश्यक जानकारी छ.
म के आशा गर्नुपर्छ?
को GED® परीक्षण मा के छ? यो आशा गर्न सक्छौं के हो:
तपाईं GED® परीक्षण लिन एक परीक्षण केन्द्र जानेछन्.
तपाईं GED® परीक्षण अनलाइन लिन सक्दैन.
तपाईं कम्प्युटरमा परीक्षण हुनेछ.
तपाईं अंग्रेजी वा स्पेनिस परीक्षण लाग्न सक्छ.
परीक्षण छ4भागहरु, प्रत्येक सामग्री क्षेत्रको लागि एक (विषय).
सारा परीक्षण बीच लिन्छ7र 8 घण्टा, तर तपाईं लाग्न सक्छ42 वर्षको अवधिमा विभिन्न दिनमा भागहरु. यो व्यस्त कार्यकर्ता र आमाबाबुको लागि राम्रो छ. यसलाई अर्थ तपाईं लागि परीक्षण प्रत्येक भाग को लागि अध्ययन गर्न चयन गर्न सक्नुहुन्छ 8 महिना, अन्य पछि एक भाग. वा तपाईंले पहिले नै थाह छ भागहरु लाग्न सक्छ, र त्यसपछि आफ्नो समय कठिन भागहरु लागि अध्ययन गर्न प्रयोग.
म कसरी थाह यदि म परीक्षण लिन तयार छु?
तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ हाम्रो निःशुल्क अनलाइन अभ्यास परीक्षण तपाईं तयार छन् भने हेर्न.
जस्तै प्रश्न के हो?
को GED® परीक्षण मा के छ? को GED® परीक्षण प्रश्नहरू विभिन्न प्रकारका छन्. परीक्षण पारित गर्न, तपाईंले सही जवाफ प्रश्नहरूको अधिकांश दिन छ.
आफ्नो परीक्षण मा प्रश्न को सबैभन्दा धेरै-छनौट प्रश्न हुनेछ. एक बहु-विकल्प प्रश्न तपाईं जवाफ एक विकल्प दिन्छ. प्रश्न पाठ बारेमा हुन सक्छ, वा यो एक तस्वीर वा नक्सा बारे हुन सक्छ. यो रेखाचित्र हुन सक्छ, चार्ट सहित, तालिका, वा ग्राफ. पाठ वा तस्बिर तल प्रश्न र त्यसपछि उत्तर सूची हुनेछ, यो जस्तो. तपाईंले सर्कल क्लिक गरेर एक सही छनौट.
धेरै-छनौट प्रश्नहरूको बारेमा राम्रो कुरा जवाफ तपाईं को सामने सधैं छ कि छ. तपाईं बस जो एक यो छ बाहिर आंकडा छ. यो के गर्न, तपाईं दिइएको जानकारी मा ध्यान हेर्न आवश्यक. धेरै ध्यान प्रश्न पढ्न, धेरै. यो तपाईं थोडा झुक्याउन सक्छ - उदाहरणका लागि, यो भन्न सक्छ, जो जवाफ साँचो छैन?
प्रश्न अन्य प्रकार
को GED® परीक्षण केही अन्य प्रश्न स्वरूप छ. उनीहरु:
खाली ठाउँ भर
तिनीहरूलाई प्रयास गर्नुहोस्!
सबै प्रयास यी GED® प्रश्न प्रकार तपाईं परीक्षण मा देख्ने. समय को अगाडि अभ्यास यदि तपाईं प्रश्न प्रकार को सबै पूरा गर्न सक्षम हुनेछ!
को GED® परीक्षण एक समावेश “विस्तारित प्रतिक्रिया” भाषा कला मा प्रश्न (पढाइ र लेखन) खण्ड. तपाईं दिइएको एक विषयको बारेमा एउटा निबंध लेख्न हुनेछ. यो छोटो निबंध हुनेछ4गर्न7अनुच्छेद (एक अनुच्छेद अर्थ एक भन्दा बढी वाक्य).
को परीक्षकको तपाईं जानकारी बुझ्न सक्छौं कि हेर्न चाहनुहुन्छ, एक विचार वा धारणा विकास, उदाहरण दिन, र आफ्नो विचार बारेमा स्पष्ट लेख्न. तिनीहरूले पनि अंग्रेजी सही लेख्न सक्छ भनेर हेर्न र आफ्नो लेखन प्रस्तुत गर्न कम्प्युटर प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ.
विषय के हुन्?
छन्4सामग्री क्षेत्रमा (विषयहरू) को GED® परीक्षण मा: सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित (छोटो लागि गणित), र भाषा कला (पढाइ र लेखन).
को GED® परीक्षण मा के छ: भाषा कला (पढाइ र लेखन)
को GED® भाषा कला (पढाइ र लेखन) परीक्षण उपाय के तपाईं के पढ्न कसरी राम्रो बुझ्न, यदि तपाईंले सही लेख्न सक्छ, र तपाईं कसरी राम्रो आफ्नो विचार व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ.
को GED® भाषा कला परीक्षण छ 150 मिनेट लामो, 10 मिनेट ब्रेक सहित. यो तीन खण्डहरू छ:
पढाइ - 60 मिनेट
लेखन (भाषा) - 35 मिनेट
लेखन (निबन्ध) - 45 मिनेट
परीक्षण पढेको भाग पाठ टुक्रा प्रश्न बुझ्न र जवाफ आफ्नो क्षमता परीक्षण हुनेछ. यो पदहरू एक भाषण बाट हुन सक्छ, चिठ्ठी, एक समाचार पत्र लेख, वा एउटा किताब देखि एक खण्ड. लेखन (भाषा) परीक्षण को भाग तपाईं लेखन को सही तरिका बारे प्रश्न हुनेछ. यो व्याकरण को आफ्नो समझ परीक्षण हुनेछ. पहिलो दुई खण्डहरू धेरै विकल्प प्रयोग, र अन्य साधारण प्रश्न प्रकार. तेस्रो खण्ड एक निबंध लेख्न आवश्यक.
तपाईं भाषा कला परीक्षण पारित गर्न कुनै पनि तथ्य थाहा गर्न आवश्यक छैन. के तपाईं प्रश्नहरूको जवाफ तपाईं पढ्दै हुनुहुन्छ के बुझ्न देखाउन आवश्यक, र तपाईं सही अंग्रेजी लेख्न सक्नुहुन्छ कि. तपाईं सिक्न सक्छौं भाषा कला परीक्षण बारेमा थप.
को GED® परीक्षण मा के छ: सामाजिक अध्ययन
को GED® सामाजिक अध्ययन परीक्षण इतिहास को आफ्नो समझ उपाय, अर्थशास्त्र र संयुक्त राज्य अमेरिका को भूगोल, र केही विश्व मुद्दाहरूको पनि.
को परीक्षकको संयुक्त राज्य अमेरिका को केही आधारभूत ज्ञान र विश्व अर्थव्यवस्था र भूगोल खोजिरहेको. परीक्षण बुझ्न र थप जानकारी व्याख्या गर्न आफ्नो क्षमता उपाय भन्दा यो तथ्य को आफ्नो ज्ञान उपाय.
को GED® सामाजिक अध्ययन परीक्षण रहन्छ 70 मिनेट. यो धेरै फरक प्रश्न प्रकार प्रयोग गर्दछ, धेरै विकल्प सहित, तानेर खसाल्नु, तातो स्थान, र भर्न-मा-द-खाली. प्रश्न शास्त्र र सरकारी गर्दै (50%), संयुक्त राज्य अमेरिका इतिहास (20%), अर्थशास्त्र (15%), भूगोल र संसार र (15%). तपाईं सिक्न सक्छौं सामाजिक अध्ययन परीक्षण बारेमा थप.
को GED® परीक्षण मा के छ: गणित
को GED® गणित परीक्षण गणित धेरै प्रकार को आफ्नो समझ मापन हुनेछ. यी बीजगणित समस्या सुलझाने समावेश, प्रक्रियागत कौशल, डाटा विश्लेषण, नम्बर भावना र तर्क कौशल.
कौशल तर्क तपाईं अगाडि जानकारी यसको बारेमा प्रश्न बुझ्न र जवाफ आफ्नो क्षमता अर्थ. परीक्षण को सबैभन्दा बस आधारभूत गणित कौशल र तर्क कौशल प्रयोग गर्नेछ. अधिक उन्नत विषयहरू सम्पूर्ण परीक्षण बाहिर केही प्रश्नहरू समेटिएका गरिनेछ.
को GED® गणित परीक्षण छ 115 मिनेट लामो र दुई भागहरु छ:
भाग 1 (पहिलो 5-7 परीक्षण प्रश्नहरू) - एक कैलकुलेटर अनुमति छैन
भाग2(परीक्षण प्रश्नहरू बाँकी - बारे 40) - एक कैलकुलेटर अनुमति दिएको छ
विद्यार्थीहरूले पहिलो प्रश्न आफ्नो जवाफ पेश गर्नुपर्छ (कैलकुलेटर अनुमति छैन) परीक्षण बाँकी गर्ने सार्दा अघि. तपाईं सिक्न सक्छौं को गणित परीक्षण बारेमा थप.
अन-स्क्रिन GED® परीक्षण कैलकुलेटर कसरी प्रयोग गर्ने बारे एक भिडियो हेर्न
को GED® परीक्षण मा के छ: विज्ञान
को GED® विज्ञान परीक्षण केही आधारभूत वैज्ञानिक विचार को आफ्नो समझ उपाय. आफ्नो परीक्षण विज्ञान केही क्षेत्रहरू केन्द्रित हुनेछ: जीवन बिज्ञान, भौतिक विज्ञान, र पृथ्वी र अन्तरिक्ष विज्ञान. यो पनि वैज्ञानिकहरू विचार कसरी विकास को आफ्नो ज्ञान परीक्षण (वैज्ञानिक विधि).
को GED® विज्ञान परीक्षण रहन्छ 90 मिनेट. यो संग 34 गर्न 45 विभिन्न प्रश्न प्रकार प्रयोग प्रश्नहरू, धेरै विकल्प सहित, तानेर खसाल्नु, तातो स्थान, र भर्न-मा-द-खाली. धेरै प्रश्न एक सरल वैज्ञानिक पाठ पढ्न र प्रश्नहरूको जवाफ तपाईं माग्छ. तपाईं पनि टेबल र चार्ट को धेरै हेर्न र तिनीहरूलाई बारेमा प्रश्नहरूको जवाफ आशा गर्न सक्छौं. के तपाईं चाहनुहुन्छ भने प्रश्नहरूको केही लागि कैलकुलेटर प्रयोग गर्न सक्छ. तपाईं सिक्न सक्छौं विज्ञान परीक्षण बारेमा थप.
म मेरो राज्य मा GED® परीक्षण लिन कसरी बारेमा प्रश्नहरू.
तिमी सक्छौ को GED® परीक्षण कसरी लिन पत्ता आफ्नो राज्य मा.
म अर्को के गर्नुपर्छ?
लिन हाम्रो निःशुल्क अनलाइन अभ्यास परीक्षण तपाईं आफ्नो परीक्षण लागि तयार छन् भने पत्ता लगाउन. तपाईं तयार हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई अर्को कदम देखाउने.
हाम्रो सुरु निःशुल्क अनलाइन वर्ग तपाईं आफ्नो परीक्षण को लागि अध्ययन गर्न आवश्यक छ भने. कुनै पनि समयमा सुरु र आफ्नो गति मा जाने.
सिक्न कसरी धेरै विकल्प प्रश्नहरूको जवाफ
हामी यहाँ तपाईं सफल मदत छन्!
GED® के हो?
TASC के हो?
के HiSet छ?